နွယ် | ZAYYA
အချက်အလက်များနှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း →
ဒီနေရာမှာ – သင်ယူတယ် ဆိုတဲ့ အဖြစ်ကို နည်းနည်း နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင်ယူခြင်း ဟာ စင်စစ် အချက်အလက်တွေ လိုက် စုစည်းတာ မဟုတ်ဘူး။ အချက်အလက်တွေ စုစည်းပြီး သိတာ နဲ့ သင်ယူတာဟာ မတူညီဘူး။ ကျနော်တို့ အသိပညာ၊ အသိသညာ ဗဟုသုတလို့ ခေါ်တဲ့ အရာတွေဟာ စုစည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ခင်ဗျား ခေါင်းခြောက်အောင် ကျက်မှတ်၊ တွဲစပ်၊ တွေးခေါ် နေနိုင်တယ်။ အချက်အလက်တစ်ခုကနေ အခြားအချက်အလက် တစ်ခုကို ကူးပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ ဒါပေတဲ့ သင်ယူတယ် ဆိုတာကတော့ အချက်အလက် မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျား မသိတဲ့ သန္တာန် တစ်ခုကနေ သိမှု သက်သက်ဆီ ကူးပြောင်းသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စင်စစ် ကျနော်တို့ရဲ့ နိစ္စဓူဝ သင်ယူမှုဟာ အဲ့ဒီ အတိုင်း ဖြစ်မှသာ တကယ် သင်ယူမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ?
ကျနော်တို့ ဘာလို့ မှီတွယ်ပါသလဲ။ စိတ် အတွင်းပိုင်းကို ငုံ့ဝင်ကြည့်ရင် တွေ့ရမှာက – ကျနော်တို့ မှီခိုနေတာတွေ တော်တော်များများ ရှိနေပါတယ်။ မိမိ ယုံကြည်မှု အပေါ် မှီခို တယ်။ မိမိ နေထိုင်ပုံ စနစ် အပေါ် မှီခိုတယ်။ မိမိ စွဲမြဲရာ ဒဿန အပေါ် မှီခို တယ်။ အဲ့ဒီ နေရာမှာ မကျေလည်ရရင် အခြား အမှီအတွယ် တစ်ခု ဆက်စပ် ထပ် ရှာ တယ်။
ကျနော်တို့ကို မျှော်လင့်ချက် ကောင်းတွေ ပေးနိုင်မလား ~ အဲ့လို ပေးနိုင်မယ့် ဆရာသခင် ရှိမလား ~ ဒါဆို ယုံကြည် ကိုးကွယ် မယ်။ ပျော်ရွှင်မှု ရရှိနိုင်မယ်လို့ ထင်သလား ~ ထင်မိတာနဲ့ စူးစမ်းကြည့် တော့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ဟာ အမှီအတွယ် တစ်ခုကို အမြဲ မပြတ် ရှာဖွေ နေတာပဲ လို့ ဆိုရမှာပဲ မဟုတ်လား။ တစ်စုံ တစ်ခုကို မှီတွယ် ရင်း လုံခြုံ စိတ်ချနေတဲ့ အဖြစ် ကို အမြဲ ရလိုနေတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါဆို ကျနော်တို့ စိတ်ဟာ အဲ့ဒီ အမှီအတွယ် တွေ အပေါ် ကပ်ညိနေတယ် ဆိုတဲ့ အတွက် အဲ့ဒီ အညွှန်းဘောင် တွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင် ပါ့မလား။
Feb. 3rd. 2012 at 9:20 PM